စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတိုထွာ | Communist Party of Burma
၂၀၁၅ အိုင်ယာလန် GDP ၂၆ ဒဿမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း တိုးကြောင်း အိုင်ယာလန်ဗဟိုစာရင်းရုံးရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က စီးပွားရေးပညာရှင်များအကြား ရယ်စရာဟာသတပုဒ် ဖြစ်နေတယ်။ စီးပွားရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ပေါလ်ခရုမန် က ‘ဘိုးဘိုးအောင်စီးပွားရေး’ Leprechaun economics လို့လှောင်တယ်။ ကုန်စည် တိုးထုတ်လို့လား။ လူထုဝင်ငွေ တိုးလာလို့လား။ နိုင်ငံတော်ထုတ်ကုန် တိုးလာလို့လား။ တခုမှမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ EU အဖွဲ့ဝင် အိုင်ယာလန်ဟာ ကြွေးဝန်ပိနေတဲ့ စီးပွားရေးကပ်ဒဏ်သင့် PIIGS (ပေါ်တူကီ ၊ အိုင်ယာလန် ၊ အီတလီ ၊ ဂရိ ၊ စပိန်) စာရင်းဝင် နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ လူဦးရေ ၅ သန်းခန့်သာရှိပြီး ကျွန်းငယ်လေးသာဖြစ်တဲ့ အိုင်ယာလန်ဟာ ဗြုန်းစားကြီး GDP တနှစ်တာဝင်ငွေ တိုးလာကာ $၂၅၇ ဒဿမ ၄ ဘီလီယံ (၂၀၁၅ ခန့်မှန်း) ဖြစ်လာတယ်။ အကြောင်းက အိုင်ယာလန်ဟာ အမေရိကန်ကော်ပိုရိတ်များရဲ့ ဗလောင်းဗလဲလုပ်ရာ (စာရင်းဖျောက်ရာ) အရပ် ဖြစ်နေလို့ပဲ။ ဥပမာဆိုပါစို့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Maltronic နဲ့ အိုင်ယာလန်ကုမ္ဂဏီ Coridien ပေါင်းကာ အိုင်ယာလန်မြို့တော် ဒပ်ဗလင်မှာ ရုံးစိုက်တယ်။ Maltronic ရဲ့ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုး assets $ ၄၃ ဘီလီယံကို အိုင်ယာလန်သို့ပြောင်းတယ်။ တကယ်ပြောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ စာရင်းအရသာ ပြောင်းတာဖြစ်တယ်။ ရုံးချုပ် အလုပ်သမား ပရိဘောဂ လှုပ်ရှားမှု ဘာမှမရှိဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အိုင်ယာလန် GDP ဟာ ရုတ်ချည်းမြင့်သွားပါတော့တယ်။
မကြာခင်ကပဲ ဥရောပသမဂ္ဂ EU က အမေရိကန် နည်းပညာ Apple ကုမ္ပဏီကို ၁၀ နှစ်စာ အခွန်ရှောင်မှုနဲ့ ယူရို ၁၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၄ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံ) နှင့် အတိုးငွေကို ပေးလျော်ဖို့ တရားစွဲတယ်။ ၂၀၁၄ မှာ Apple က အမြတ်ငွေ ယူရိုတသန်းတိုင်းအတွက် အိုင်ယာလန်အစိုးရသို့ (စာရင်းပြောင်းခ) အခွန် ယူရို ၅၀ သာပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြတယ်။ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ၇၀၀ လောက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကို အိမ်လုပ်ကာ အိုင်ရစ်အလုပ်သမား ၁၄၀၀၀၀ ကို အလုပ်ပေးထားကြောင်း အိုင်းရစ် နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Charles Flanagan က ထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။ (၂၀ -၉-၂၀၁၆)
ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ (၆ မေ ၂၀၁၆) မှာ အနီးဆုံးပြိုင်ဘက်ထက် မဲနှစ်ဆလောက်အသာနဲ့ တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရလာတဲ့ သမ္မတသစ် ဒူတာတေး(၇၁ နှစ်) Rodrigo Duterte ဟာ အပြောကြမ်းသော်လည်း ပြည်တွင်းမှာ လူကြိုက်များလှတယ်။ အကျင့်ပျက်ခြစားပြီး မာဖီးယားဂိုဏ်းများဖြင့် အမြီးချင်းလိမ်နေတဲ့ အစိုးရဟောင်းများကို ငြီးငွေ့လှပြီဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများအဖို့ ဒူတာတေးဟာ အသစ်အဆန်းဖြစ်နေတယ်။ သူဟာ ဖီလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်း မင်ဒါနာအိုကျွန်း ဒါဗိုမြို့ရဲ့ မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ၂၂ နှစ် လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း ရာဇဝတ်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိမ်နင်းခဲ့မှုနဲ့ ဒဲ့ဒိုး(တဲ့တိုး)အပြောကြောင့် လူကြိုက်များတယ်။ သူတက်လာပြီးနောက် ၂၀၁၆ ဒုတိယလေးလပတ် GDP ဟာ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်လာတယ်။
မူးယစ်ဆေးသမားတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမယ်။ အဖမ်းမခံသူတွေကို အသေပစ်သတ်ဖို့အထိ အမိန့်ပေးထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ မူးယစ်ဆေးဆွဲသူ ၃၀၀၀ ကျော် အသတ်ခံရပြီး၊ သိန်းနဲ့ချီလာရောက်အဖမ်းခံတယ်လို့ သတင်းများကဆိုတယ်။ သူ့လုပ်ရပ်ကို လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုအပေါ် ခတ်ကြမ်းကြမ်းပဲတုံ့ပြန်တယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ စုံစမ်းရေးမှူးတထောင်မကလို့ ဘန်ကီမွန်းလာပြောလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး။ နောက်ဆုံးဆေးသမားကို သုတ်သင်မပြီးမချင်း ရပ်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ပြောတယ်။ (မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာဟာ လူတွေ သတ်ပြရုံနဲ့ ပြီးပြတ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ လူမှုရေးပြဿနာဖြစ်လို့ ရေရှည်ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။)
ဒါတင်မကဘူး၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ ပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့ ဝေဖန်တာကို ကုလသမဂ္ဂကနေ နှုတ်ထွက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ် (နောက်တာပါလို့ ပြန်ပြောတယ်)။ ငတ်မွတ်မှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို နိုင်အောင်မနှိမ်နင်းနိုင်ဘူး။ အီရတ် ဆီးရီးယားမှာ အရပ်သားတွေသေနေတာကို အဆုံးမသတ်နိုင်ဘူး လို့ ကုလသမဂ္ဂကို ဝေဖန်တယ်။
လာအို အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ (စက်တင်ဘာ ၆ – ၈) အိုဘားမားအပေါ် အပြောကြမ်းတဲ့မှတ်ချက်စကားကြောင့် သမ္မတနှစ်ဦးတွေ့ဆုံပွဲကို အမေရိကန်ဘက်က ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။ တရားရေးနဲ့မညီတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုများအဖြစ် မေးခွန်းမထုတ်ဖို့နဲ့၊ ဖိလစ်ပိုင်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ရုပ်သေးမဟုတ်၊ မိမိဟာ အချုပ်အခြာပိုင် နိုင်ငံတခုရဲ့သမ္မတဖြစ်ကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူမှအပ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး စသဖြင့်ပြောတယ်။ ‘မိန်းမရွှင်ရဲ့သား’ဆိုပြီး အိုဘားမားကို ဒေသိယစကားနဲ့ ဆဲတယ်။ (နောက်မှ ပြန်တောင်းပန်တယ်)။ အမေရိကန်ကို စိတ်ခုကာ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ ကျင့်သုံးမယ်၊ နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေး ထူထောင်မယ်၊ စစ်လက်နက်များကို တရုတ်နဲ့ရုရှားထံမှ ဝယ်တော့မယ် စသဖြင့်ပြောတယ်။ (သူနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ရဲ့ ကိုလိုနီတပိုင်းလို ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်က ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။)
သူဟာ မြို့တော်ဝန်ဘဝမှာကတည်းက အပြောကြမ်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖိလစ်ပိုင်ကို အလည်လာစဉ်တုန်းက လမ်းပေါ်မှာ ၅ နာရီကြာ ကားရပ်ထားရတာကို ခွေးမသားပုတ် အိမ်ပြန် နောက်မလာနဲ့တော့လို့ ဆဲမိတဲ့အပေါ် စာရေးတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
အငြင်းပွားဖွယ် အာဏာရှင်သမ္မတဟောင်း မားကို့စ်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ဖိလစ်ပိုင်မှာ မြှုပ်နှံခွင့်ပြုမယ်လို့လည်း ဆိုတယ်။
တရုတ်နဲ့ အငြင်းပွားနေတဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်က ကျွန်းများကိစ္စ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောသံ မကြားရဘူး။ အဲဒီကျွန်းတွေအပေါ် ငါလေယာဉ်စီးပြီး ဖြတ်ပျံပြမယ်လို့ပြောတယ်။
အပြောကြမ်းသော်လည်း သူ့ရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ရပ်ကတော့ ၁၉၆၀ စုနှစ်များကတည်းက ဖြစ်ပွားလာတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မီးကို ငြှိမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ဇူလိုင် ၂၅ မှာ သမ္မတဒူတာတေးက တဖက်သတ်အပစ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ရှိ လက်နက်ကိုင်သူပုန် ၄ ဖွဲ့အနက် ၃ ဖွဲ့နဲ့ (ဖီလစ်ပိုင်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၊ မိုရိုအစ္စလမ်မစ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး MILF ၊ မိုရိုအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး MNLF) နော်ဝေး-အော်စလို မှာ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး၊ ၉လ မှ ၁၂လ အတွင်း အပြီးသတ်ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုရဖို့ ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ် အတည်ပြုကြတယ် (၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၁၆)။ ဖီလစ်ပိုင်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် ဒူတာတေးရဲ့ ဆရာလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Joes Maria Sison က ‘သမိုင်းဝင် မကြုံစဖူးဖြစ်ရပ်’ လို့ပြောတယ်။ စီးပွားရေးမညီမျှမှုနဲ့ အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေဖျက်သိမ်းရေးကို ဦးတည်ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ လူပြန်ပေးဆွဲပြီး အကြမ်းဖက်လေ့ရှိတဲ့ Abu Sayaf အဖွဲ့နဲ့တော့ မဆွေးနွေးဘူး။ MNLF ရဲ့ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးမှုနဲ့ ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ နော်ဝေးအမျိုးသားတဦးကို အဘူရှာရဖ်အဖွဲ့က ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။
ဖိလစ်ပိုင် ဆီးနိတ်(အထက်လွှတ်တော်) တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Mrs. De Lina ဦးဆောင်ပြီး ဥပဒေကျော်လွန်လူသတ်မှုဖြင့် သမ္မတဒူတာတေးကို စွဲချက်တင်ကြားနာပွဲ ၃ ရက်လုပ်ပြီးနောက် မဲခွဲရာမှာ (၁၆-၄-၂)မဲဖြင့် ရှုံးနိမ့်သဖြင့် De Lina နှင့် ၈ ဦး နှုတ်ထွက်သွားရတယ်။ ဒူတာတေးက မူးယစ်ဆေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အချိန် ၆ လ ထပ်တိုးကြောင်း ကြေညာတယ်။ ရာဇဝတ်သား တသိန်းအထိ သတ်ပစ်မယ်။ မင်းတို့အားလုံးကို မနီလာပင်လယ်အော်ထဲ ပစ်ချပြီး ငါးစာကြွေးပစ်မယ်။ ၆လအတွင်း မူးယစ်ဆေးပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ငါနှုတ်ထွက်မယ်လို့ ပြောတယ်။
အပြောကတော့ကြမ်းတယ်။ သတင်းသမားတယောက်က ‘ခင်ဗျားဟာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်လိုပဲ ထင်ရာမြင်ရာ စွတ်ပြောတတ်တာပဲ’လို့ ဆွပေးတော့၊ ဒူတာတေးက ‘သူက ထင်ရာမြင်ရာပြောတဲ့ကောင်၊ ငါကမဟုတ်ဘူး’လို့ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တယ်။ နောက်တော့ ထရမ့်ကိုထိခိုက်အောင် ပြောမိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပြန်တယ်။
ကျူးဘား ဂျပန် နှင့် မြောက်ကိုရီးယား
စက်တင်ဘာ ၂၄ ၊ ၂၀၁၆ ။ ရိုမီယူရီ ရှင်ဘွန်း Yomiuri Shimbun သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှ အရေးအသားကို လိုရင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်နှင့်ကျူးဘားအကြား အများဆိုင်ရာနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံး၌ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက မြောက်ကိုရီးယားအရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်း လမ်းပွင့်စေပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးဟာ ကျူးဘားကို အလည်အပတ်သွားရောက်တဲ့ ပထမဆုံး ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။ ကျူးဘားသမ္မတ ရောလ်ကက်စရ်ိုနဲ့ တွေ့စုံဆွေးနွေးပြီး နှစ်ဖက်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တိုးမြှင့်ဖို့ သဘောတူကြတယ်။
အာဘေးက ဆေးဝါးပစ္စည်းနဲ့ ကင်ဆာကုသရေးအတွက် ယန်း ၁ ဒဿမ၂၇၃ ဘီလီယံ ထောက်ပံ့မယ့်အကြောင်း ကြေညာတယ်။ ‘စီးပွားရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျူးဘားနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်။ ကျူးဘားဟာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံဖို့ အလားအလာကောင်းတဲ့ ဒေသဖြစ်တယ်’ လို့ဆိုတယ်။
မနှစ်က ဇူလိုင်လအတွင်း ကျူးဘား-အမေရိကန် ၅၄ နှစ်ကြာ ပြတ်တောက်နေတဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်တယ်။ ထိုအချိန်ကစလို့ တခြားနိုင်ငံများကလည်း ဟားဗနားနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင် ကြိုးစားလာကြတယ်။ ကျူးဘားဟာ နစ်ကယ်နှင့် တခြားတွင်းထွက်များ ပေါများပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားတယ်။
ကြွေးမြီ ယန်း ၁၈၀ ဘီလီယံအနက် ယန်း ၁၂၀ ဘီလီယံကို လျှော်ပစ်ဖို့ ဂျပန်ဘက်က ကတိပြုတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီရုံးကို ကျူးဘားမှာ ဖွင့်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ စွမ်းအင်ကဲ့သို့ နယ်ပယ်များမှာ အလေးထားကူညီဖို့ ဖြစ်တယ်။
မကြာခင်နှစ်များက ကျူးဘားဟာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ နဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက နည်းသေးတယ်။
ရောလ်ကက်စထရိုနဲ့ စကားပြောရာမှာ အာဘေးက မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက် ပြဿနာကို ‘မတူညီတဲ့အဆင့်အလျောက် အတိတ်ရဲ့အန္တရာယ်’ အဖြစ် ဖော်ပြပြီး အတူတကွဖြေရှင်းဖို့ ပြောတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားက ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ဂျပန်အမျိုးသားများအရေး ကျူးဘားရဲ့ ပူးပေါင်းကူညီမှုကို ဆွေးနွေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျူးဘားခေါင်းဆောင်က ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ အရေးကြီးကြောင်းပဲ ပြောတယ်။
နျူကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက် ကိစ္စဟာ မြောက်ကိုရီးယား စီးပွားရေးကို ဘေးသင့်စေပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုကိုလည်း ပျက်ပြားစေတယ်။ ဒီအချက်ကို ပြုံယန်း သဘောပေါက်အောင် လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ကျူးဘားအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှ မြောက်ကိုရီးယားကို ဖျောင်းဖျဖို့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျူးဘားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဖီဒယ်ကက်စရို နဲ့လည်း အာဘေး တွေ့တယ်။ ၂၀၀၃ က ဟီးရိုရှီးမားကို အလည်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီဒယ်က ယခုလိုပြောပါတယ်။ ‘နျူကလီးယားလက်နက်မဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်း နှစ်နိုင်ငံသဘောတူတယ်’။
ကိုလံဘီယာ စစ်အေးလွန် ငြိမ်းချမ်းရေး
၅၂ နှစ်ကြာ ကိုလံဘီယာပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ကိုလံဘီယာသမ္မတ ဟွမ်မန်နျူရယ် ဆန်းတို့စ် နှင့် လက်ဝဲသူပုန်တပ်ဖွဲ့FARC (Revolution Armed Force of Colombia) ခေါင်းဆောင် တင်မိုချန်ကိုတို့ ၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် ဟားဗားနားမြို့၌ လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ၊ ကျူးဘားသမ္မတ ရောလ်ကက်စထရိုနဲ့ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်အများအပြား တက်ရောက်တယ်။ ၁၉၉၀ နှစ်များက အယ်လ်ဆာဖေဒိုးနှင့် ဂွာတီမာလာ စစ်ပွဲများ အဆုံးသတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ FARC သူပုန်တပ်သား ၇၀၀၀ နဲ့ နောက်လိုက် ၁၇၀၀၀ ပါဝင်တယ်။
သဘောတူညီချက်တွင် စစ်ကာလအတွင်း နှစ်ဖက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုများကို နှစ်ဖက်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ တရားခုံရုံးက စစ်ဆေးရန်၊ FARC ကို တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည်ဖို့ အစိုးရမှကူညီရန်တို့ ပါဝင်တယ်။ ယခုသဘောတူညီချက်ကို အောက်တိုဘာ ၂ တွင် သဘောတူမတူ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်မယ်။
ဂျွန်ကယ်ရီက သမိုင်းဝင်နေ့၊ ခက်ခက်ခဲခဲစေ့စပ်ရ၊ ရှေ့မှာလုပ်စရာအခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိသေးကြောင်း ပြောတယ်။ ကျူးဘားနဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ပြီးနောက် အမေရိကတိုက်မှ စစ်အေးတိုက်ပွဲ လက်ကျန်ပဋိပက္ခ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့မှုအတွက် အိုဘားမားက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ အောင်မြင်မှုတရပ်အဖြစ် ချီးကျူးပြောကြားတယ်။
ဒါပေမဲ့ (အောက်တိုဘာ ၃၊ ၂၀၁၆) လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း မဲရုံများ ရေတွက်ပြီး စာရင်းအရ ၅၀ဒဿမ၂ ရာခိုင်နှုန်း ဆန့်ကျင်၊ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြတယ်။ အစိုးရနဲ့သူပုန် နှစ်ဖက်စလုံးက လေးနှစ်ကြာစေ့စပ်ခဲ့ရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားတယ်။ (၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆)
ကမ္ဘာ့စည်းစနစ်သစ်နဲ့ ပတ်သက်၍ တရုတ်-အမေရိကန် ကွဲလွဲချက်
(နိုင်ငံတကာ့နယ်ပယ်မှာ တရုတ်-အမေရိကန်တို့ဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေကြသော်လည်း ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးသစ် new normal အတွက် မူဝါဒနှင့်စည်းမျဉ်းပိုင်းတွင် ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း ကွဲပြားနေတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ တရုတ်ပညာရှင် Wang Jisi (ပီကင်းတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာ မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ) နှင့် Kenneth Lieberthal(ဘရုတ်ကလင်းတက္ကသိုလ် တရုတ်-အမေရိကန် ရေးရာ ပညာရှင်)တို့ ပူးတွဲရေးသားတဲ့ တရုတ်-အမေရိကန် မဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ သံသယ China-US Strategic Distrust စာတမ်းမှ လိုရင်းကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။)
န်ိုင်ငံရေးအားဖြင့် တရုတ်က ‘ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး’ကို ရပ်ခံတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ အများစုဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံကိုအခြေပြုတဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ နိုင်ငံတကာစနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်။ အမေရီကန်က ‘လစ်ဘရယ်နိုင်ငံတကာစည်းစနစ်’ကို ဆော်ဩပြီး ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့ ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးရှိတဲ့ ‘ဒီမိုကရေစီကမ္ဘာကြီး’ကို လှုံ့ဆော်တယ်။ အထက်ပါအယူအဆ နှစ်ရပ်ကွဲလွဲမှုက မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ အတားအဆီးကို ဖြစ်စေတယ်။
စီးပွားရေးအားဖြင့် အမေရိကန်ဟာ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်း တပုံကြီးကိုပြဋ္ဌာန်းပြီး နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကန့်သတ်တယ်၊ အလုပ်သမားစံနှုန်းကိုမြှင့်တယ်၊ သတင်းလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းစေတယ်၊ သဘာဝဝန်းကျင် ဂေဟစနစ်ကို ကာကွယ်ဖို့ပြောတယ်၊ နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ဖို့ပြောတယ်။ ပစိဖိတ်ကျော် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (ကုန်သွယ်ဝန်ဆောင် သဘောတူညီချက်)TPP ၊ အတ္တလန်တိတ်ကျော် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး သဘောတူချက်) TAP အတွက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးတယ်။
အဲဒီထဲက တချို့စည်းမျဉ်းတွေကို (ဥပမာ၊ အစိုးရပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံတာ) တရုတ်က လက်မခံနိုင်ဘူး။ တရုတ်က လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အာရှ အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် AIIB မှာ အမေရိကန်က မပါဘူး။ တရုတ်က ဆော်ဩနေတဲ့ ခါးပတ်လမ်းကြောင်း One Belt One Road ကိုလည်း စောင့်ကြည့် အနေအထားပဲရှိတယ်။ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတာ မချောမွေ့သေးဘူး။ နည်းပညာမြင့် ပို့ကုန်တွေ တရုတ်ကို တင်ပို့ရာမှာလည်း အတားအဆီးတွေ ရှိနေသေးတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ စိုးမိုးမှုအနေအထားကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း တရုတ်ရဲ့မဲပေးခွင့် တိုပွားလာမှာနဲ့ တရုတ်ယွမ်ငွေ နိုင်ငံတကာသုံး ဖြစ်လာမှာကို အမေရိကန်က အပြုသဘော မတုန့်ပြန်ဘူး။ အမေရိကန် နိုင်ငံအတွင်း တရုတ်စီးပွားရေး (ပုဂ္ဂလိကအပါ) လှုပ်ရှားလာမှုအပေါ် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ရှုထောင့်နဲ့ ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်တယ်။
ဒါတွေက အမေရိကန်အနေနဲ့ တရုတ်ရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးပေါ်လစီကို ဘောင်ခတ်ပြီး အမေရိကန်အတွက်သာ အကျိုးရှိမည့် စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့ စီးပွားရေးပုံစံ သဟာဇာတမဖြစ်မှုဟာ အတားအဆီးတွေ ပိုများလာတယ်။
နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးနယ်ပယ်တွင် တရုတ်က တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို မိရိုးဖလာပင်လယ်ပြင်အဖြစ် မြင်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒ အခွင့်အရေး နဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အမျိုးသားအချုပ်အခြာနဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေတည်တန့်မှုအဖြစ် သဘောထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်က တောင်တရုတ်ပင်လယ် အများပိုင်းကို နိုင်ငံတကာရေပြင်အဖြစ် ‘နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ လွတ်လပ်စွာ ရေကြောင်းသွားလာခွင့်’ကို ကိုင်ဆွဲတယ်။
ဒီလိုမူဝါဒအငြင်းပွားမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပထဝီနိုင်ငံရေး အကြောင်းအချက်တွေ ရှိတယ်။
အမေရိကန်နဲ့တရုတ် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို မြင့်မြင့်မားမား အလေးထားပြီး တဦးရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို တဦးက အန္တရာယ်ပြုနေတယ်လို့ မြင်ကြသော်လည်း သူတို့တဦးချင်းရဲ့ အလေးထားမှုခြင်း ကွာခြားပြန်တယ်။ တရုတ်က ပြည်တွင်းကွန်ရက်အတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ထိုးဖောက်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုအာဏာကို တိုက်ခိုက်လာမှာကို စိုးရိမ်တယ်။ အမေရိကန်က online hackers တွေရဲ့ စီးပွားရေးအချက်အလက်တွေ ခိုးယူမှုနဲ့ လုံခြုံရေးအေဂျင်စီကွန်ရက်ကို တိုက်ခိုက်လာမှုအပေါ် စိုးရိမ်တယ်။
နှစ်ဖက်အစိုးရ ပညာရှင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ပုံမှန်တွေ့စုံဆွေးနွေး လာခဲ့သော်လည်း သံသယနဲ့ မယုံကြည်မှုကို မချေဖျက်နိုင်ရုံတင်မက ပိုလို့တောင် တိုးပွားလာတယ်။
၂၀၁၇ မှာ အိမ်ဖြူတော်ကို ဘယ်သူရောက်လာမလဲ ဆိုတာထက် အမေရိကန်က ဖိအားပိုပေးလာမှာကိုပဲ တရုတ်ကစိုးရိမ်တယ်။ အမေရိကန်ဘက်ကလည်း တရုတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေးအပေါ် ရှုတ်ထွေးတဲ့ ပူပန်မှုရှိတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖင် ရဲ့ ‘သိုသိုသိပ်သိပ်နေ မလောနဲ့’ ဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာအယူအဆအစား ပိုစွာတဲ့ သဘောထားနဲ့ အစားထိုးလာမှာကို စိုးရိမ်တယ်။ မဟာဗျူဟာသံသယ တိုးပွားမှုဟာ တရုတ်-အမေရိကန် ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးသစ်ကို ထိခိုက်စေတယ်။
ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးသစ် ထူထောင်ဖို့အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးက ပဋိပက္ခ နဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးမှုကို ရှောင်ရှားပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို လိုလားတဲ့ မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်း မိမိတို့ပြည်သူများကို ရှင်းပြရုံတင်မက၊ နှစ်ဖက်အစိုးရများအကြား မကြာခဏဆက်သွယ် ညှိနှုင်းခြင်းဖြင့် အထင်အမြင်ရှုပ်ထွေးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ သဘောထားညီညွတ်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။
ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျားက ‘တရုတ်ပြည်’ ON China ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ယခုလိုတင်ပြခဲ့တယ်။ အမေရိကန်- တရုတ် ‘ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ တစတစပြောင်းလဲရေး ’ co-evolution ဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရမယ်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ပြည်တွင်းရေးကို ကောင်းအောင်လုပ်၊ ဖြစ်နိုင်သမျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၊ ပဋိပက္ခကို နည်းအောင်လုပ်ရမယ်။
ကစ်ဆင်းဂျားပြောတဲ့ co_evolution ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်ပြိုင်ခြင်း peaceful competation ကိုပြောတာလို့ထင်တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံက မိမိရဲ့ပြည်တွင်းရေးကို ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သလဲ မိမိပြည်သူတွေကို ကျေနပ်မှုပေးနိုင်သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်သာ အမေရိကန်နဲ့တရုတ် အကြား အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ပြိင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရည်ညွှန်း။ As Distrust Mounts, U. S and China Battle Over New Rules of Global Order.
(၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆)
← ကျွန်မဆက်၍ရေးချင်သောဖေဖေအကြောင်းများ။ဆောင်းပါးအမှတ်(၄၁) ပူးဝင်နေတဲ့ သရဲ တစ္ဆေ ဆိုတာ →